IFLIX MYANMAR ANNOUNCES CASH IN-STORE SUBSCRIPTION PAYMENT OPTION – amazingyangon
Home /Media/IFLIX MYANMAR ANNOUNCES CASH IN-STORE SUBSCRIPTION PAYMENT OPTION
Yangon, April 25, 2017 – iflix, the world’s leading Subscription Video on Demand (SVoD) service for emerging markets, is thrilled to launchanew payment solution for its members in Myanmar. Starting April 20, iflix members in Myanmar will be able to pay for their subscriptions to iflix’s world-class service through revolutionary payment solutions provider, Red Dot Network. With over 14,000 partner retail outlets across Myanmar, Red Dot Network’s innovative payments solution allows iflix subscribers to conveniently pay cash in-store for monthly and annual subscriptions, with no credit card required.
iflix is priced at only 3,000 MMK per month in Myanmar for unlimited access with no ads. Annual subscribers receiveatwo-month discount off the monthly rate for year-round access at only 30,000 MMK. For new subscribers, iflix offersacomplimentary one-month trial with full access to its world-class service, features and content. Go to www.iflix.com or download the app from Google Play or the Apple App Store to register.
As the first international SVoD service to establish full-scale operations in Myanmar, each iflix subscription includes:
• Unlimited access to iflix’s vast library of thousands of first-run exclusive shows, award-winning TV series, blockbuster movies, popular local and regional content, children’s programs and much more, offered in both Zawgyi and Myanmar subtitles;
• Access to iflix on up to five devices at once, including phones, tablets, laptops, desktops, TVs and other connected devices;
The ability to share subscriptions with family or friends and watch up to two shows on different devices at the same time.
iflix Myanmar Country Manager, Adeana Greenlee said: “We are excited to offer customersanew way to pay for their subscriptions. Our partnership with Red Dot isatestament to iflix’s commitment to customer experience, enabling easy cash transactions through thousands of Red Dot affiliate outlets throughout the country.”
“Red Dot Network is happy to beapayment partner of iflix, and we are committed to providing ease of access and convenience to our consumers across Myanmar. Through our extensive network, iflix users can walk into any local Red Dot store and pay for their iflix subscription fee.” added Wout De Jong, CEO, Red Dot Network.
With more than5million members across the region and over5billion minutes streamed since launch, iflix has established itself as the clear market leader in video streaming. Now available in 10 territories across Southeast Asia, including recent launches in Pakistan, Vietnam and Myanmar, iflix additionally announced its Joint Venture with Zain, iflix Arabia, to make its world class service available in the MENA region.
ABOUT RED DOT NETWORK Red Dot was founded in May 2014 and first launched operations in Myanmar in January 2015. Red Dot is the leading Electronic Mobile Top-Up service in Myanmar, also providing bill payment and mobile money services across the country, specifically tailored to the local market. Since launch the Myanmar based company has grown at an extraordinary rate to nationwide network of more than 14,000 retailers, adding bill payment, e-commerce and world first innovative solutions. Red dot hasaunique mix of executive experience, technical knowhow and over 400 strong team of talented employees to deliveraworld leading system tailored to the unique requirements of Myanmar.
ကမ္ဘာင့်တိုးတက်ဆဲစေ်ိုးကတက်မ်ိာုးတတင်ဦိုးဆောင်မေနွင်င့် လစဉ်ေ ကိုးေိုးပးင် တာမနက်မှရ်ရှင်မ်ိာုး ကင်င့်ရှုနို င်ွောဝမန်ဆောင်မှု iflixွင် မြမန်မာနို င်င ရွှိုးစတွဲမ်ိာုးးတတက် ငေတေိုွးတင်ိုးမှု မနင်ိုးလမ်ိုွးစ်က မ တ်ဆက်ေိုးနို င်တောင့်မင်ဖြစ်ေ ကာင်ိုး ဂ ဏ်ယဲစတာကေငာ်းပွင်။ ဧြီလ ၂၀ ရက်မှ စတင်ပ မြမန်မာနို င်င ရှ iflixွိုးစတွဲမ်ိာုးးမေနဖြင်င့် ၄င်ိုးတု့၏ ကမ္ဘာင့်းဆင်င့်မီ ၀မန်ဆောင်မှု iflix လစဉ်ေ ကိုးက ဆမန်ိုွးစ်ွော ငေတေိုွးတင်ိုး မှုဆ င်ရာ ဝမန်ဆောင်မှု Red dot ကတမန်ယက်မှတစ်ဆင်င့်ေိုးခ်ေနို င်တောင့် မင်ဖြစ်ွင်။ မြမန်မာနို င်င တစ်ဝှမ်ိုး လက်လီဆ င်ေ ပင်ိုး ၁၄,၀၀၀ ကေ်ာ် ရှွော Red dot Network့ ၏ ဆမန်ိုွးစ်ွော ငေတေိုွးတင်ိုးမှုမနင်ိုးလမ်ိုွးင် iflix လစဉ်ေ ကိုးေိုွးတင်ိုး ကင်င့်ရွှုဲမ်ိာုးိးာုး လစဉ်ေ ကိုးနှိုင်င့် နှိုစ်စဉ်ေ ကိုးမ်ိာုးကးေ ကတိုးဝယ်ကဒ်မလ ဘဲ ဆ င်တတင်းလတယ်တကဲေိုွးတင်ိုးနို င် စေမင်ဖြစ်ွင်။
းကမန်ုွးတ်မဲင့် ကင်င့်ရှုခတင်င့်းတတက် တစ်လလ်ှင် ၃,၀၀၀ က်ွာ က်ွင်င့်မင်ဖြစ်ြီိုး မင်ွင်င့်ကော်ငြာမှ်ျးနှေိုာက်းယှက်မရှ ဘျဲ ကင်င့်ရှုနို င်မင်ဖြစ်ွင်။ နှိုစ်စဉ်ေ ကိုးေိုးပွိုးစတွဲမ်ိာုးးမေနဖြင်င့် ၂ လ လှေ်ာင့်စေ်ိုး ရရှ မင်ဖြစ်ွင်င့်းတတက် ၃၀,၀၀၀ က်တင်ိုးဖြင်င့် တစ်နှိုစ်စာ ကင်င့်ရှုနို င်မင်ဖြစ်ွင်။ျiflix ကျွိုးစတွဲွးစ်မ်ိာုးးတတက်ျ၎င်ို့း၏ ကမ္ဘာင့်းဆင်င့်မီဝမန်ဆောင်မှု၊ လ်ဆောင်ခ်က်မ်ိာုးနှိုင်င့် ရ်ရှင်မ်ိာုးကြး င်င့်းဝွးိုြး ၊ ကင်င့်ရှုနို င်စေရမန် တစ်လးခမဲင့် ကင်င့်ရှုခတင်င့်ကေိုးိးာုွးင်။ွိုးစတွဲမ်ိာုးးမေနဖြင်င့် www.iflix.comွုတိာုးပးကောင်င့် မှတ် တင်နို င် ပွင်(ွု)၊ Google Play (ွု) Apple App Store မှ iflixးက် လီကေိုးရှင်ိုးဒေပင်ိုးလ ဒ်လ်ြီိုး မှတ် တင်နို င် ပွင်။
မြမန်မာနို င်င တတင်ြး င်င့်းဝလ်ငမန်ိုးလင် တ်မှုးခြေခ င်စေရမန်ရင်ရတယ်လ်ဆောင်မေနွင်င့်းမဆိုးနို င်င တကားဆင်င့်မီလစဉ်ေ ကိုးေိုးပးင်တာမနက်မှရ်ရှင်မ်ိာုး ကင်င့်ရှုနို င်ွောဝမန် ဆောင်မှု ဖြစ်ွင်င့်းလေ်ာက် iflix တတင် လစဉ်ေ ကိုးေိုွးတင်ိုးွးိုြး ခြင်ိုးဖြင်င့်ေားက် ပတုက ရရှ နို င် ပွင် –
• iflix တတင်ွာ ကင်င့်ရှုနို င်ွင်င့်ွီိုွးမန်ု ရှိုးမ်ိာုး၊ ဆ ရ ရ်ွ စီိုးရီိုးမ်ိာုး၊ ၀က်ဝက်ကတဲ လဲကြ က်မ်ိာုွးင်င့် ရ်ရှင်မ်ိာုး၊ ရေ မန်ိုးစိာုးမေနွင်င့်ြ င်တတင်ိုး၊ ဒွေတတင်ိုး ရ်ရှင်မ်ိာုး၊ ကလေိုးမ်ိာုးးတတက်းစီးစဉ်မ်ိာုးနှိုင်င့်းခြိာုွးေားရာမ်ိာုးစတာက စ စင်ိုးိးာုွးင်င့်းလတမန်ကြီိုးမိာုးလွှော Library က ဇော်ဂ်ီ၊ မြမန်မာယဲမနီက ဒ် စာတမန်ိုးိးုးမ်ိာုးဖြင်င့်းကမန်ုွးတ်မဲင့် ကင်င့်ရှုနို င်ခြင်ိုး
• ဖ မန်ိုး၊ တက်ဘ်လက်၊ လက်တောင့်၊ ဒက်စ်တောင့်၊ တီဗီနှိုင်င့်းခြိာုးခ် တ်ဆက်ပရွော စ္စင်ိုးမ်ိာုးးပးဝင် စ္စင်ိုးးရေးတတက် ၅ ခးး iflix က တစ်ြ င်တင်ိုးွးိုြး နို င်ခြင်ိုး
•းင်တာမနက်နှိုင်င့် ခ် တ်ဆက်မိးာုးခ် မန်တတင်းင်တာမနက်ဖတင်င့်စရာမလ ဘဲ စ တ်ကြ က် ကင်င့်ရှုရမန် ဖ မန်ိုး ၊ တက်ဘ်လက် နှိုင်င့်းခြိာုးမ ဘ င်ိုး စက် စ္စင်ိုးမ်ိာုးတတင် ရ်ရှင်မ်ိာုး ၊ ရ်ွ စီိုးရီိုးမ်ိာုး ဒေပင်ိုးလ ဒ် လ်နို င်ခြင်ိုးလစဉ်ေ ကိုးေိုွးတင်ိုးိးာုးမှုက မွိာုးစ (ွု) မ တ်ဆေတမ်ိာုးနှိုငင့် မှ်ဝေနို င်ြီိုး ရှိုး ၂ ခးး မတဲငွီော စ္စင်ိုး မ်ိာုးေ ပတတင် တြ င်တင်ိုး ကင်င့်ရှုနို င်ခြင်ိုး
“ ကျတမန်မတုးမေနမနဲု လစဉ်ေ ကိုးးတတက် ငေတေိုွးတင်ိုးနို င်မယ်င့် မနင်ိုးလမ်ိုွးစ်တစ်ခ ကွိုးစတွဲတေတးးရောက်ုေိုးဖုစ တ်လှုရှိာုးမေနမ ပတယ်။ Red Dot Network မနဲုိုးေ ပင်ိုးဆောင်ရတက်မှုွာိုးစတွဲတေတးဆင်ြေ စေဖုက ရင်ရတယ်ိးာုးတဲင့် iflixးတတက်ွက်ြွေ ခ်က်တစ်ခ ဖြစ်ြီိုး နို င်င တစ်ဝှမ်ိုးမှာရှ တဲင့် ထော်ြ ငေ ငင်ာ်ငျြာား်သြော်ြ
Red dot ဆို င်ာ်ငြှတျားငဆ င့ ငေတွိာုးမနဲုးလတယ်တကဲ လစဉ်ေ ကိုးေိုွးတင်ိုးနို င်စေဖုလ်ဆောင်ေိုးိးာုး ပတယ် “်iflix့ ၏ Country Manager Adeana Greenlee ကြောကိာုးခဲင့် ပတယ်။
“ Red Dot Network အနေမနဲု iflix ရဲ့ ငေတေိုွးတင်ိုးမှုဆ င်ရာ မ တ်ဖက်ဖြစ်ရတဲင့်းတတက် ၀မ်ိုွးာမ ပတယ်။ မြမန်မာနို င်င မှာရှ တဲင့် ကျတမန်တော်တုရွဲို့းစတွဲတေတွိုးရလတယ်ေားင်၊းဆင်ြေေားင် လ်ဆောင်ေိုး မယ်လုကျတမန်တော်တုယ ကင် ပတယ်။ iflixွးိုြးွဲတေတးမေနမနဲုလညငင ကျ နငတော်ငြတို့ရ ထော်ြ ငေ ငင်ာ်ငျြာား်သြော်ြ Red dot ဆ င်တေတကွတိာုြးီိုး iflix လစဉ်ေ ကိုးေိုးခ်ေလုရ တောင့်မှဲာဖြစ် ပတယ် “်Red Dot Network ၏ CEO၊ Wout De Jong ကလင်ိုးးင်င့်ွတင်ိုြးောကိာုးခဲင့်ွင်။ စတင်ဖတင်င့်လှစ်စဉ်ကမေန ယခွးိုးစတွဲ ၅ွမန်ိုးကေ်ာ်နှိုင်င့် မ မနစ်ေ ပင်ိုး ၅ ဘီလီယ ကေ်ာ် တ က်ရ က် ကင်င့်ရှုမှုက ရရှိးာုွးော iflixွင် ဗီဒီယ တ က်ရ က် ကင်င့်ရှုနို င်ွင်င့် ၀မန်ဆောင်မှုမ်ိာုးဲးတတင် စေ်ိုးကတက်ဦိုးဆောင်ွဲးဖြစ်းင်းင်ရှိာုးရှိာုးရ်တင်မေနြီဖြစ်ွင်။ လက်ရှ တတင် မ ကာွေိုးမီက ဖတင်င့်ျလှစ်ိးာုွးော ပကစ္စတမန်၊ ဗီယက်မနမ်၊ မြမန်မာနို င်င တုး ပးဝင်းရှေ့တောင်ားရှ ၁၀ နို င်င တတင် iflix က ကင်င့်ရှုနို င်ြီဖြစ်ွင်။ iflixွင်MENA(းရှေ့းလယ် င်ိုးနှိုင်င့် မြောက်ျားဖရ က) ဒွေတတင် ၄င်ို့း၏ ကမ္ဘာင့်းဆင်င့်မီဝမန်ဆောင်မှုက ၀မန်ဆောင်မှုေိုးရမန် iflixားရေ ဘီိုးယိာုးက Zain နှိုင်င့်ဲိုးတတဲလ်က င်မင်ဖြစ်ေ ကာင်ိုး်းမကေငာခဲင့်ွင်။ ### Iflixးေ ကာင်ိုး
တိုးတက်ဆဲစေ်ိုးကတက်မ်ိာုးတတင် ဦိုးဆောင်မေနွင်င့်းခေ ကိုးငေတေိုးပးင်တာမနက်မှရ်ရှင်မ်ိာုး ကင်င့်ရှုနို င်ွော ၀မန်ဆောင်မှု iflixွင်ွိုးစတွဲမ်ိာုး ကင်င့်ရှုရမန်းတတက်ေားင်နှိုင်င့်ခ်ွီင်င့် ရ်ရှင်မ်ိာုး၊ တီဗီရှိုးမ်ိာုးက ဝမန်ဆောင်မှုေိုးမေန ပွင်။ iflix တတင်ွာီိုွးမန်ြွုင်င့် ရ်ွ စီိုးရီိုး မ်ိာုး၊ဆ ရ ရ်ရှင်မ်ိာုးနှိုင်င့် ရှိုးးမြောက်းမ်ိာုးက ရေတိုးခ်ယ် ကင်င့်ရှုနို င်မှာဖြစ်ြီိုး ဒွေတတင်ိုး နှိုင်င့် နို င်င တတင်ိုးးစီးစဉ်မ်ိာုးလင်ိုး ပဝင်ွင်။ iflixွင် ရ်ရှင်၊ စီိုးရီိုးမ်ိာုးက
ဒေ ငငလိုဒငလို ငလွိုင်ဖြစ်စေ တ က်ရ က် ကင်င့်ရှုလွင်ဖြစ်စေးလတယ်တကဲ ကင်င့်ရှုနို င်ေားင် ဆောင်ရတက်ေိုးိးာုွးင်။ စာရင်ိုွးတင်ိုး ကင်င့်ရွှုဲမ်ိာုွးင် လစဉ်ေ ကိုး မနင်ိုးမနင်ိုးဖြင်င့် ဖ မန်ိုး၊ တက်ဘ်လက်၊ လက်တောင့်၊ တီဗီနှိုင်င့်းခြိာုွးော device မ်ိာုးေ ပတတင်းခ် မန်မရေတိုး၊မေနရာမရေတိုး ကြင်င့်ရှုနို င်မင်ဖြစ်ွင်။ Let’s play
Myanmar Premium presents Together Festival Yangon 2017